HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid oo Bar-bar dhac kala kulantay Kooxda Sevilla, Horyaalka oo sii adkaaday
May 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain 0
Kooxda Kubadda Cagta Real Madrid ayaa bar-baro kala kulantay Sevilla Kulan ka tirsan Horyaalka La Liga Spain taasi oo mar kale sii murjisay Xaalada Horyaalka ee dhanka kala sarreynta.
Real Madrid oo Kulankan lagu ciyaarayay Garoonkeeda ayaa halis u gashay in ay u dhacdo kaalinta 3aad ilaa laga gaaro dhamaadka ciyaarta markaasi oo Hazard u dhaliyay goolka labaad.
Kooxda Sevilla ayaa hogaanka ciyaarta qabatay Daqiiqadii 22aad xidiga Fernando ayaana ka caawiyay Goolka isla qeybta Hore Real Madrid ayaa laga diiday gool iyadoo lagu kala nastay goolkaasi.
Qeybta Danbe ee Ciyaarta Real Madrid ayaa heshay goolka bar-baraha Marco Asensio ayaana ka caawiyay goolkaasi lakin Sevilla ayaa mar kale hogaanka ciyaarta qabatay kadib gool rigoore ah uu u dhaliyay Ivan Rakitic.
Real Madrid ayaana u muuqatay mid guul daro la kulmaysa Kulankan ilaa dhamaadka ciyaarta markaasi oo Hazard u dhaliyay gool neefta ku soo celiyay Kooxda.
Natiijada ayaa ka dhigan in Real Madrid ay ku soo laabato kaalinta Labaad ee Horyaalka iyadoo leh 75 dhibcood.